Hong Kong: Mitohy ireo Fanafihana Goavana amin’ny alàlan’ny DDoS, Mikendry Vohikalam-baovao Mpomba ny Demokrasia · Global Voices teny Malagasy
Mitohy ireo Fanafihana Goavana amin'ny alàlan'ny DDoS ao Hong Kong.
Voadika ny 12 Avrily 2019 17:56 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jona 2014)
Fifanakalozan-kevitry ny Occupy Central (Bodoy ny Afovoany) tamin'ny Aprily 2013. Nokorontanin'ireo vondrona Mpomba an'i Beijing any Hong Kong ilay fifanakalozan-kevitra. Sary avy amin'i Bandari Lei tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 2.0)
Andro vitsivitsy taorian'ny fanafihana goavana tamin'ny alàlan'ny DDoS natao taminà rafitra fifidianana an-tambajotra iray tarihin'olompirenena, nahitsoky ny mpijirika informatika ireo vohikalam-baovaon'ny Apple Daily ao Hong Kong sy Taiwan. An'ny Next Media avokoa ireo gazety roa ireo, izay iray amin'ireo orinasa mpanao gazety lehibe indrindra any Hong Kong. Mpanohana ilay Hetsipanentanana Occupy Central tarihin'olompirenena, izay mitaky ireo tena zo marina ho an'ny rehetra amin'ny fifidianana mandritra ny fifidianana ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong, i Jimmy Lai Chi-ying, mpanangana ny Next Media.
Io vohikala vaovao io no tena lasibatr'ireo fanafihana mampiasa DDoS tany aloha noho ny toerany amin'ny maha-mpomba ny demokrasia azy. Saingy tena goavana loatra ny haben'ilay fanafihana tamin'ity indray mitoraka ity, hany ka nanafotra ny rafitr'ilay mpamatsy tolotra fiarovana amin'ireo DDoS mihitsy izany, araka ny tenin'i Tim Yiu, Tale Teknikan'ny Next Media. Nanomboka teo amin'ny 3 ora maraina teo ilay fanafihana tamin'ny 18 Jona ary samy nihitsoka avokoa ireo tranonkalan'ny Apple Daily tany Hong Kong sy tany Taiwan nandritra ny folo ora mahery. Nampiasa ireo tambajotra sosialy ireo fikambanan'ny fanaovangazety mba hanaparitahana ireo vaovao farany, anatin'izany ny Facebook, YouTube ary ny Instagram.
Nilaza ilay famantarana ny vohikalan'ny Apple Daily News ao amin'ny Facebook fa tsy ho voarahon'ireo mpijirika izy ireo ary hanohy ny fitenenany.
Mino i Jimmy Lai fa avy any Beijing ilay fanafihana, anatin'ny ezaka fampanginana ireo feo manohana ny Hetsipanentanana Occupy Central sy ny fitsapankevibahoaka ho avy izay mety hitondra fiovàna eo amin'ny rafi-pifidianana any an-toerana. Samy nanao tatitra mivalapatra mikasika ilay hetsipanentanana avokoa ireo gazety roa ireo ary nandritra ireo volana vitsivitsy lasa, nanatrika hetsika maro i Jimmy Lai, mampiseho ny fanohanany ny fitsapankevibahoaka sy ny Hetsipanentanana Occupy Central. Namoaka fanambarana manameloka io fanafihana io ilay gazety:
…Misy antony matoa izahay tena miahiahy fa ireo mpijirika informatika avy any Sina no nanatanteraka io fanafihana io, izay miezaka ny hanafoana ny fahavononan'ny vahoakan'i Hong Kong hiady ho an'ny demokrasia, sy miezaka ny hanafika ilay vondron'ny Next Media mpomba ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara.
Namoaka fanambarana ihany koa ny Fikambanan'ny Mpanaogazety ao Hong Kong, manameloka ilay fanafihana ho toy ny ezaka mahery setra mba hampanginana ny feon'ireo mpanohitra. Namporisika ny polisin'i Hong Kong mba hanadihady mikasika ilay fanafihana ho toy ny tranganà heloka bevava an-tambajotra ihany koa izy.
Raha jerena ny haben'ny fanafihana, miomana amin'ny ratsy indrindra ho avy mandritra ny fitsapankevibahoaka sy ny hetsika Occupy Central hatao atsy ho atsy, izay manentana ny tsy fankatoavan'ny sivily, ireo sehatra fizaram-baovao tsy miankina sy an'olontsotra anaty aterineto any Hong Kong. Na dia mbola afaka manohy mizara vaovao amin'ny alalan'ireo tambajotra sosialy aza ireo vohikalam-baovao, mety hisy fiantraikany any amin'ny dokambarotra tokoa, izay fidiram-bola fototra ho azy, ireo fanakorontanana maharitra.
Ho fanampin'ilay fanafihana mampiasa DDoS, nampijalian'ireo endrika famoretana ara-politika maro ny Next Media tamin'ity taona ity. Tamin'ny volana lasa farany teo, banky lehibe roa, HSBC sy ny Standard Chartered no nanala ny dokambarotrany tao amin'ilay gazety ary nilaza ny tomponandraikitra ambony iray avy tao amin'ny Next Media fa teo ambany famoretan'ireo manampahefana mpomba an'i Beijing ireo banky ireo. Tamin'ny Jona 2013, nisy olona nampidona fiara nangalarina teo ambavahadin'i Jimmy Lain tany Kowloon ary namela famaky sy antsy iray.
Mba hiatrehana ilay fanafihana anaty aterineto, nanapa-kevitra ny hanitatra ny fe-potoam-pifidianana amin'ilay fitsapankevibahoaka manomboka ny 20-22 Jona ka hatramin'ny 20-29 ny Fandaharanasa Fanehoankevitry ny Daholobe ao amin'ny Anjerimanontolon'i Hong Kong.